Maxay tahay hanjabaadda culus ee uu Erdogan u diray dowladda Netherland? - Caasimada Online
Home Warar Maxay tahay hanjabaadda culus ee uu Erdogan u diray dowladda Netherland?
Maxay tahay hanjabaadda culus ee uu Erdogan u diray dowladda Netherland?
Ankara (Caasimada Online) – Recep Tayyip Erdogan oo ah hoggaamiyaha geesiga ah ee ka taliyo dalka Turkiga ayaa ka hadlay tallaabadii ay qaaday dowladda Netherland kadib markii laba wasiir oo ka tirsan dowladda Turkiga loo diiday inay qudbad u jeediyaan jaaliyada Turkiga ee ku nool dalka Netherland oo ku soo ururay qunsuliyada ku taal magaalada Rotterdam.
Madaxweynaha Turkiga ayaa hanjabaad culus u diray dhigiisa Netherland wuxuu u sheegay inuu ka shanleyn doono arrintaas ay ku dhaqaaqeyn.
Madaxweynaha ayaa ka dhawaajiyey in dhawaaca soo gaaray xiriirka dowladaha Turkiga iyo Netherland ay noqon doonto caqabad iyada qabsato taas ay ka qoomameyn doonto, wuxuuna hadalkaan imaaday markii Netherland ay u diiday dalkeeda inay soo galaan labo wasiir oo Turkish ah.
Tallaabada ay qaaday Netherland ayey ku macneysay inay ka cabsatay inuu banaan-baxaas uu qalqal gelin karo amaanka dalkeeda maadaama ay soo dhawdahay doorashada la filay inay wadankaas ka dhacdo.
Dadweynaha isku soo baxay sameyn rabay ayaa doonayey inay muujiyaan taageerada ay u hayaan aftida loo qaadayo ballaarinta awoodda Madaxweynaha Turkiga.
Madaxweyne Erdogan ayaa ku eedeeyay wadamada reer Galbeed Islam Neceyb waxana uu ku baaqay in ururada caalamiga ay ku soo rogaan cunoqabatayn dalka Netherland.
“Waxaan u malaynayay in xilligii Nazigu uu dhamaaday, laakiin waan qaldanaa waayo Nazinimada waxa ay weli ka jirtaa wadamada reer galbeedka,”ayuu yiri Madaxweyne Erdogan.
Balse waxa uu Erdogan ammaanay dalka Faransiiska oo u oggolaaday muwaadiniinta reer Turkey in ay isku soo baxaan uuna qudbad u jeediyo Mr Cavusoglu.
Ra’iisal Wasaaraha Netherland Mark Rutte ayaa ka dalbaday Madaxweyne Erdogan inuu ka bixiyo cudurdaar isla barbardhigga uu ku sameeyay wadankiisa iyo Naziga.